Sagalee tumsa kora miseensoota ABO Ameerikaa Bitaa – Welcome to bilisummaa
Sagalee tumsa kora miseensoota ABO Ameerikaa Bitaa
bilisummaa July 7, 2013	1 Comment
Toronto fii naannoo isitti
Guyyaa: July 3, 2013
Gara: Kora miseensota ABO Ameerikaa Bitaa
Garamii: Koree waloo sochii ABO fii THBO naannoo Toronto itti qindeeysuuf dhaabbatte.
Qindoomina sochii siyaasa Oromoo kan yaroo ammaa Toronto fii naannoo isitti dhaaboota kee- nya ABO/OLF fii THBO/ULFOn utubamee deemaa jiru bakka buunee, salaamataa jaallummaa tiifii hawwii bilisummaa tan fedhii Oromummaa tiifii jaalala bilisummaa Oromiyaa irraa burqite sagalee takkaa fii hafuura tokkoon gara keeysan hoggaa dabarsinu, gammachuu honga hin qabneetu nutti dhagayama. Nu ofkolchaa! Qunnamtii gaarii isiniin jenna !
Itti aansinee, korri keeysan kora milkii, kora humnoota bilisummaa Oromiyaatiif qabsaawan mara walitti harkisu, jaalalaafii jaallummaa jidduu itt magarsee walitti itichu, qabsaawotaa fii sabboontota Oromoo walitti urgeeysee walitti mi’eeysu, kora qabsoon bilisummaa Oromiyaa hooggana waloo tokko jalatti deebitee qindoominaa fii waaltummaan akka sossootu qooda isaa gumaachu, kora dhuma irratti murtiilee jajjabduu haala kanaa fii kan kana fakkaatan irratti da- barsee gammachuu fii nagayaan addaan ka’u akka isiniif tahu hawwiin keenya guddoo dha.
Haalli qabatamaan yaroo ammaa akka sabatti keeysa dabraa jirru, gaddisiisaa tahee, haala duk- kanaawaa dha. Haala jeeqamaa dha. Sabni keenya ammallee harqoota gabrummaa jala jira. Bi- yti teenya Oromiyaan ammallee bittaaa alagaa jala jirti. Mootummaa alagaa yartuu Wayyaanee dhaan gaggeeffamtuutu hiree teenya muree murteeysaa jira. Qabeenya keenya hila tokkoon maletti saamaa saamsisaa jira. Ummata keenya roorroorfii miidhaa adda addaatiin lafa irraa duguugaa jira. Beelaa fii dhukkubaan, deegaa fii doofummaan galaafachaa jira. Mootummaa farra ilma nammaa taate tanaatu humnaan bakka saba keenyaa bu’ee addunyaa sobaa jira. Rir- moota keeysaa gargaarsifattee qabsoo bilisummaa Oromiyaa dhaamsuuf yoo dadhabe ammo ukkaamsuufii laamsheysuuf karaa tahe maraan bobbahaa jira. Ummata keenya jiilchuu fii qab- soo isaa irraa fageeysuuf, gameeyyii qabsaawotaa fii sabboontota Oromoo barbaaddee gataa jira. Kaan biyyaa arihaa jira. Kan kana irraa hafan ammo mana hidhatti guurtee lubbuu itti gu- raaraa jira.
Haalli addunyaatiis, akkuma laallee garru itti haala roora’aadha. Waarooma hinqabu. Dhugaa irratti osoo hin tahin dantaa fii jabeenya irratti irkata. Isuma humna qabuutu deeggarsa isaanii qabaata. Kan humna hin qabne ammo dhiitamee jiraata.
Keeysa keenya deebinee hoggaa laalluus, wanni sirraawu qabu hedduu tu mul’ata. Keeysattuu dhimma jaarmayaa tiifii hoogganaa irratti gaaffii gurguddoo tu dhihaata. Humna bilisummaa Oromiyaa itti amantu keeysaa harki guddaan ammallee jaarmayaan alatti faffaca’ee jiraata. Hammi xiqqaan jaaramees garee garee dhaan adda babahee qindoominaan alatti munyuuqata. Walitti baqee jaarmaya waliigalaa tiifii hooggana waaltawaa tokko burqisiisuu hindendeenye. Haalli kun itti fufuu hinqabu. Hatattamatti Jijjiiramuu qaba jennee amanna.
Karaa biraatiin, jijjiiramaa fii geeddaramoota adda addaa kan yaroo ammaa adeemsa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keeysatti mul’achaa jiran ifdura qabnee hoggaa laallu, fuuldurri keenya ifaafii fuulbana tahuu isaa haalli nuuf tilmaaman hedduu tu mul’ata. Fakkeenyaaf,
1. Gadi buunee ija gatiitiin yoo laalle, yoom irraahuu caalaa har’a kaayyoon bilisummaa
Oromiyaa dhukkuba Toophiyummaa irraa qulqullaawaa dhufuu isiiti garra,
2. Rirmoonni keeysaa, ayyaan laallattootaa fii seera dhabloonni, gantootaa fii abdii kutat- toonni kaayyoo bilisummaa Oromiyaa dahoo godhatanii yaroo dheertuuf dhukkuba Toophiyummaa qaamaa fii sammuu qabsoo bilisummaa Oromiyaa keeysa facaasaa turan saaxil bahanii qabsoo keeysaa moggatti tufamuu isaanii ti garra,
3. Hafuurri humnootaafii qabsaawota bilisummaa Oromiyaa jidduu jiru yoom irraahuu caalaa urgaawaa, jaaraafii abdachiisaa tahaa dhufuu isaa ti hubanna,
4. Gaaffiin araaraa fii tokkummaa, qindoominaa fii waaltummaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keeysatti yoom irraahuu caalaa ulfina fii dhageeytii arkachaa finiinaa dhufuu isiiti garra. Yoo irratti hojjanne, haalli kun deebinee ifsirreeysuuf, hireefii dambooba gaarii nuuf laata.
Waliigalatti, haala kana keeysaa injifannoon bahuuf, jaallawwan, humna murteeysaa tahuu qabna. Humna murteeysaa tahuuf ammo diinoota keenyaa olitti qophaawuu fii qabsaawuu tu nurra jira. Humna teenya, dendeeytii teenya, qabeenya keenyaa fii ogummaa teenya, muuyxan- noofii qarooma keenya mara hooggana tokko jalatti hiriirsinee qabsaawuu nu barbaachisa. Kana irratti walqabannee halkanii guyyaa haa hojjannu. Jaarmayootaa fii hoogganoota keenya garasitti haa dhiibnuu. Humna bilisummaa fii walabummaa jabeeysuu fii waalteysuun !! Qabsoo bilisummaa Oromiyaa qindeeysuu fii humneeysuun!! dhaadannoo yaroo tahuu beeynee waliin irratti haa cichinuu. Jabaadhaa haa jabaannu.
Irra deebinee korri keeysan kora milkii haa tahu jenna !
Korri itti aanu kora qabsaawota maraa akka nuuf tahu abdiin teenya guddoodha ! Injifannoo ummata Oromootiif !
Oromiyaan ni bilisoomti !
Koreen sagalee tumsaa isiniif dabarsitu tuni, koree waloo sadarkaa Toronto fii naannoo isitti, sochii dhaaboota keenyaa qindeeysuuf, bakka bu’oota qaamoota ABO sadeen (ShG + QC + GQM) fii THBO/ULFO irraa dhaabbatte tahuu gammachuun isin hubachiisna. Galatoomaa.
Falmaa Sabaa 2
Previous TPLF AND HIS TERRORIST DEPORTMENT.
Next Baha Oromiyaa Aanaa Mayyuu Muluqqee; Mootommaan garee Soomalee wajji horii fii meeshaa keenya nu saamaa jirti
Berhanu Hundee Barreeffamni kun waan dheeraa ta’eef, akka dubbistoota hin nuufisneef, kutaa afuritti addaan baasee …
Yoo warra biyya keessa Jabeessitaan Bilisumman Oromoo Dhiyoo dha.